Afaka miresaka ela be amin’ny havana any Antalaha na any Antsirabe aza i Jean-Claude - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
R. Hajatiana Léonard il y a 5 années
Isan-karazany ny zava-mahaliana vokarin’ireo manam-pahaizana momba ny teknolojy amin’izao vanin’andro iainantsika izao. Mahazo làka izany, raha eo amin’ny tontolon’ny serasera sy ny fifandraisana manokana no jerena. Eto am-perin’ny fiandohan’ny taona 2015 tsara isika izao; fotoana hifampirariana ny soa amin’ireo havana aman-tsakaiza eto an-toerana na any an-tany lavitra. Ezaka ihany ny handeha hitety fari-tany, hamangy ny fianakaviana rehetra raha toa ka tsy nisy ilay antsointsika malagasy hoe “aterineto”. Mampihaona antsika mivantana ireo tambazotra misy ao aminy, ary tsy voatery miondrana isaky ny mandeha vao hifanatri-tava amin’ny havana, fa manao sikaipy fotsiny dia vita. Hita taratra izay filàn’ny olona azy izay amin’izao asaramanitra izao satria tsy toy ny isan’andro ny tombom-barotra azo, raha ny fanazavan’ireto mpanao sibera, ary tsy maharaka ny solosaina ampiasaina hanaovana ny fifandraisana. Moramora kokoa ny saran’ny iray minitran’ny an’ny aterineto toy izay ny an’ny antso an-tariby. Roa-polo ariary isa-minitra ny manao aterineto; ny finday kosa fito ariary ttc isan-tsegondra, izany hoe roa-polo sy efa-jato isa-minitra vao afaka miteny Allô. “Mahafinaritra ny mikirakira azy, satria afaka mifamaly sy miresaka ela be amin’ny internet, sady tsy mahita holazaina intsony izaho rehefa lava ny resaka….tena manara-po mihitsy”; hoy i Jean Claude, mpianatra, raha nanontaniana teo am-panaovana “facebook”, miresaka amin’ny reniny any Antalaha. Dia gaga anefa saina fa, vao zazakely manodidina ny folo taona monja, dia efa solosaina no kilalaony ary hainy ny mikitika azy. Tafiditra anatin’ny fahaizana miserasera avokoa izany, satria natao hampisokatra ny saina ny teknolojy amin’ny maha mpampita torohay azy. Misy aza ny manambara fa sahala amin’ny olona bado ny tsy mahay sy tsy maharaka ny firoborobon’ny vokatra ara-pikarohana avy amin’ny teknolojy vaovao.
Angaha vitan’ny resaka fotsiny
“Tsy vitan’ny fifampiresahana an-tariby sy an-tsoratra fotsiny koa. Tsy maintsy nifanatrehana, nifanazavana, nifandresen-dahatra. Izany no antony nandehanako, nitety ny vazan-tany efatra hanafainganana ny famitranam-pihavanana iraisam-pirenena”, hoy ny filoha Hery Rajaonarimampianina tao anatin’ny lahateniny, raha nirari-soa ny vahoaka malagasy izy ny 29 desambra 2014. Mila fahamatorana ny fanatontosana asa goavana toy itony, indrindra fa raha resaka fampandrosoana firenena anankiray izany. Nahatsapa ny ngidin’ny fahantran’ny malagasy ny mpitondra ka nanao izay ho afany; iray amin’izany hoy izy ny fiverenan’ny AGOA. Ambeti-tenin’ingahy filoha ny hoe “harin-karem-pirenena”; inoana anefa fa misy fifandaminana tsy tomombana hatramin’izay ao matoa dimam-polo taona nahazoana ny fahaleovan-tena isika izao, mbola mihanoka anatin’ny fahantrana lalina ny ankamaroan’ny vahoaka malagasy. Tsy efan’ny ara-teknolojy ny mamaha ny olan’ny krizy eto Madagasikara fa ny fifanatonana sy ny fifampihainoana mifanatrika mivantana no vahaolana ho amin’ny fampandrosoana. Ny tambazotra sôsialy manko fampitam-baovao faran’izay haingana, fa tsy sehatra kosa hiadian-kevitra maharitra. Ny fiavian’ny korontana koa indraindray, dia io aterineto io; noho izy afaka manozongozona ny saina. Aleo misaina sy mitandrina fa any no fanitaran’ny olona resabe: mandrangitra ny hafa ary mety hampisy sakoroka tsy ampoizina. Irariana ny hoavy hamiratra raha izao fisokafan’i Madagasikara indray amin’ny firenena any ivelany izao. Miankina amin’ny fahatsiarovan-tenanao raha tianao hiarin-doha indray sy handroso i gasikara. Tsy adidin’ingahy Hery Rajaonarimampianina irery ny fanarenana ny nosy fa ianao sy ny tsirairay no fanalahidiny. Angataho amin’ilay nahary ny fitahiny mba tsy hisy tavela ny mafy rehetra nampahory nandritra iny 2014 iny ary izay hiaina hahita.